I-Semalt Shares Top 6 Izici Ze-Web Data Extractor
I-Web Data Extractor ingenye yamathuluzi anamandla kakhulu futhi adumile. Isetshenziselwa ukukhwabanisa ulwazi kusuka kumasayithi ahlukene wezokuxhumana, izingosi ezishintshayo, izingosi zokuhamba, amawebhusayithi okuthenga kanye namabhulogi angasese.
Ungasebenzisa i-Web Data Extractor ukuqoqa futhi ulandele idatha kusuka kuma-URL athile, amathegi we-meta, izihloko ze-meta nezincazelo. Ungakwazi ngisho nokuhlela idatha yakho ngokusekelwe kumagama angukhiye amancane nomsila omude ngaleli thuluzi. Izinzuzo ezinkulu zeWeb Data Extractor zixoxwe ngezansi.
1 - fotografia social defini??o. Ithuluzi lonke-in-one:
I-Web Data Extractor iyinkomba yonke futhi yenza imisebenzi eminingi ngesikhathi esifanayo. Akusiyo kuphela isicwecwe esiphezulu kodwa futhi sinamandla we-crawler wewebhu. Ngesidingo seDatha yeWebhu, ungakwazi ukushicilela okuqukethwe okufakwe kusayithi lakho noma ngokushelela amakhasi akho wewebhu ukuze uthole kangcono i-rankings injini. Le nsizakalo iphinda ilandise ulwazi kusuka kumakheli e-imeyili ahlukene, izinombolo zocingo, nezinombolo zefeksi, ukukunikeza imiphumela enembile nefike ngesikhathi.
2. Ubumfihlo nokulondeka:
Ngokungafani namanye ama-scrapers ejwayelekile , i-Web Data Extractor iqinisekisa ukuvikelwa nokuphepha kwakho kwi-intanethi. Uma idatha ishaywa, le software isindisa ku database ephephile futhi kwenza kube lula ukulanda amafayela on hard drive yakho. Noma ubani ngeke aze afinyelele okuqukethwe kwakho okukhishwe. Eqinisweni, ungavikela amafayela akho afanele ngephasiwedi.
3. Ukuvikelwa kogaxekile okuphelile:
I-Web Data Extractor ivikela idatha yakho kusuka kubangani obubi ne-spam. Iyaziwa kakhulu nge-interface yayo yomsebenzisi-friendly futhi ikuvumela ukuba ufinyelele idatha eyiqiniso futhi enembile kuphela. Ngalesi sevisi, akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi. Wonke ama-URL asetshenzwa ku-database yolwazi oluyimfihlo futhi ulwazi lugcinwe kulwazi lomuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi linikeza izihlungi zedatha, izihlungi zombhalo, nezihlungi zesizinda. Ivumela ukuvuselelwa komsebenzisi okukhethwa kukho.
4. Okuqukethwe okukhulu kwewebhu kwamabhizinisi:
Enye yezinkinga ezinkulu esihlangabezana nazo yikhwalithi nokunemba kokuqukethwe. Asikwazi ukushicilela ama-athikili ngephutha lamapelomenti noma amapremu. I-Web Data Extractor ilungisa zonke iziphambeko ezinkulu nezincane ekuqukethwe kwethu kwewebhu ngokuzenzakalelayo. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lokusebenza ludinga inombolo enkulu yamasayithi futhi kufanelekile kumabhizinisi.
5. Izinguqulo ezahlukene zitholakalayo:
Ungafinyelela izinguqulo zayo mahhala futhi ezikhokhelwayo ngesikhathi esifanayo. Ukuqala, ama-freelancers kanye nama-webmasters, iWeb Data Extractor yindlela ehle yokungenisa. io. Kumabhizinisi aphakathi nendawo amakhulu, inguqulo yayo ekhokhelwayo iyatholakala. Isofthiwe ayiyona intengo enkulu futhi ivula zonke izinketho nezici ezithakazelisayo kuwe. Isebenzisa ubuchwepheshe bomhlaba obunikazi obunamalungelo obunikazi kanye nobuchwepheshe bokubheka ukubuka ulwazi kusuka ezinkulungwaneni zamasayithi. Nge-Extra Data Adware yeWebhu, ungakha ama-agent okuhlukanisa okwehlukile kumzuzwana futhi awudingi amakhono okuhlela.
6. Ukuhamba Ngezindlela Ezinengqondo:
I-Web Data Extractor ihamba ngezinyawo ngamakhasi ahlukene wewebhu futhi ikuthola ulwazi oluphezulu lwe-notch ngesikhathi. Kumelwe nje ugcizelele idatha futhi uyivumele ukuthi ibone izixhumanisi zangaphakathi nangaphandle. Isofthiwe izoqoqa futhi ihlele idatha. Ungathola imiphumela oyifunayo emizuzwini emibili kuya kwemibili. I-Web Data Extractor inqume ukuthi ishaya amakhasi angaphezu kwezigidi zewebhu kuze kube manje.